အာရုံကြော အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ...! - Thadin
HomeHEALTHYအာရုံကြော အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ…!
အာရုံကြော အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ…!
May 16, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on အာရုံကြော အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ…!
အာရုံကြော အားနည်းရောဂါ သည် အာရုံကြောများ ပျက်စီးမှု ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အာရုံကြောများ၏ တာဝန်မှာ ဦးနှောက်နှင့် ပင်မအာရုံကြောမကြီးမှ သတင်းအချက်အလက်များကို ခန္ဓာကိုယ်၏ ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပို့လွှတ်ပေးပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများမှာ လက်များ၊ ခြေထောက်များ လှုပ်ရှားမှု အားနည်းခြင်း၊ ပင်အပ်နှင့် ထိုးသကဲ့သို့ စူးကနဲ၊ ပူကနဲ ဖြစ်ခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း၊ အထိမခံနိုင်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့လူနာများတွင် ချွေးထွက်မမှန်ကန်ခြင်း၊ အထိုင်အထ မိုက်ခနဲဖြစ်ခြင်း၊ ဆီးဝမ်းနှင့် အစာခြေဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ယောကျာ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ၊ ရောဂါ ပိုးများ၊ ဇီဝဖြစ်စဉ် ပြဿနာများ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ အာရုံကြောကို ဖိမိခြင်း၊ Vitamin ချို့တဲ့ခြင်း၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ပြဿနာများ၊ အလိုအလျောက် ခုခံမှုအား ဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ကျောက်ကပ်အသည်းရောဂါများ၊ မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါများ၊ အဆိတ်အတောက်များ ထိတွေ့မှု တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထုံနေခြင်းကြောင့် အရေပြားထိခိုက် လွယ်ခြင်း၊ အပူလောင်လွယ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ရှနာဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်လွယ်ခြင်း၊ ဟန်ချက်မညီပဲ ချော်လဲလွယ်ခြင်း။
အာရုံကြောအားကောင်းစေသော ရဲယို၊ မြင်းခွာရွက်၊ ဒန့်သလွန်ရွက်၊ ဆင်တုံးမနွယ်တို့ကို မကြာခဏ စားပေးသင့်သည်။ ထို့ပြင် ငါးကြင်း၊ ငါးလူး၊ ငါးသလဲထိုး တို့ကို ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နှင့် ချက်စားခြင်း၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ သံပရာသီးသုပ်တို့ကို မကြာခဏ စားပေးသင့်သည်။ မျှတသော၊ ကြေညက်လွယ်သော အာဟာရတို့ကို စားပေးရမည်။ သွေး အားကောင်းစေသော အစားအစာ၊အသီးအနှံများကိုလည်း စားသုံးပေးသင့်သည်။
အာရုံကြောအားနည်း ရောဂါတွင် အအေးခံလွန်းခြင်း၊ အအေးစာများကို လွန်စွာစားသုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အစာကိုအချိန်မှန်မစားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ အတက်စာများ အစားများခြင်း၊အိပ်ရေးပျက်ခံခြင်း၊ ပင်ပန်းသောအလုပ်များ လွန်စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
အာရုံကြော အားနည်းရောဂါကို သက်သာစေရန်အတွက် သင့်လျော်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ စားသောက်ချိန်ကို အချိန်မှန်စေခြင်း၊ အချိန်မှန်မှန် အိပ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေရန်အတွက် တရားထိုင်ခြင်း၊ နွေးနွေးထွေးထွေးနှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော နေရာတွင်နေခြင်း၊ နံနက်စောစောတွင် နေပူဆာလှုံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။
အာရုံကွော အားနညျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာနိုငျသညျ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာမြားနှငျ့ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျမြား
အာရုံကွော အားနညျးခွငျးဆိုတာ ဘာလဲ နောကျဆကျတှဲဘာတှေ ဖွဈလာနိုငျလဲ
အာရုံကွော အားနညျးရောဂါ သညျ အာရုံကွောမြား ပကျြစီးမှု ကွောငျ့ ဖွဈသော ရောဂါဖွဈပါသညျ။ အာရုံကွောမြား၏ တာဝနျမှာ ဦးနှောကျနှငျ့ ပငျမအာရုံကွောမကွီးမှ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ခန်ဓာကိုယျ၏ ကနျြအစိတျအပိုငျးမြားသို့ ပို့လှတျပေးပါသညျ။
ရောဂါလက်ခဏာမြားမှာ လကျမြား၊ ခွထေောကျမြား လှုပျရှားမှု အားနညျးခွငျး၊ ပငျအပျနှငျ့ ထိုးသကဲ့သို့ စူးကနဲ၊ ပူကနဲ ဖွဈခွငျး၊ ထုံကငျြခွငျး၊ အထိမခံနိုငျဖွဈခွငျးတို့ ဖွဈပါသညျ။ အခြို့လူနာမြားတှငျ ခြှေးထှကျမမှနျကနျခွငျး၊ အထိုငျအထ မိုကျခနဲဖွဈခွငျး၊ ဆီးဝမျးနှငျ့ အစာခွဆေိုငျရာ ပွဿနာမြား၊ ယောကျြားမြား စှမျးဆောငျရညျ အားနညျးခွငျးတို့ ဖွဈနိုငျပါသညျ။
ထိခိုကျ ဒဏျရာမြား၊ ရောဂါ ပိုးမြား၊ ဇီဝဖွဈစဉျ ပွဿနာမြား၊ ဆီးခြိုရောဂါ၊ အရကျသောကျခွငျး၊ အာရုံကွောကို ဖိမိခွငျး၊ Vitamin ခြို့တဲ့ခွငျး၊ ရိုးတှငျးခဉျြဆီ ပွဿနာမြား၊ အလိုအလြောကျ ခုခံမှုအား ဆိုငျရာရောဂါမြား၊ ကြောကျကပျအသညျးရောဂါမြား၊ မြိုးရိုးလိုကျသော ရောဂါမြား၊ အဆိတျအတောကျမြား ထိတှမှေု့ တို့ကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါသညျ။
ထုံနခွေငျးကွောငျ့ အရပွေားထိခိုကျ လှယျခွငျး၊ အပူလောငျလှယျခွငျး၊ ထိခိုကျရှနာဖွဈလှယျခွငျး၊ ပိုးဝငျလှယျခွငျး၊ ဟနျခကျြမညီပဲ ခြျောလဲလှယျခွငျး။
အာရုံကွောအားကောငျးစသေော ရဲယို၊ မွငျးခှာရှကျ၊ ဒနျ့သလှနျရှကျ၊ ဆငျတုံးမနှယျတို့ကို မကွာခဏ စားပေးသငျ့သညျ။ ထို့ပွငျ ငါးကွငျး၊ ငါးလူး၊ ငါးသလဲထိုး တို့ကို ကငျပှနျးခဉျြရှကျနှငျ့ ခကျြစားခွငျး၊ ရှောကျသီးသုပျ၊ သံပရာသီးသုပျတို့ကို မကွာခဏ စားပေးသငျ့သညျ။ မြှတသော၊ ကွညေကျလှယျသော အာဟာရတို့ကို စားပေးရမညျ။ သှေး အားကောငျးစသေော အစားအစာ၊အသီးအနှံမြားကိုလညျး စားသုံးပေးသငျ့သညျ။
အာရုံကွောအားနညျး ရောဂါတှငျ အအေးခံလှနျးခွငျး၊ အအေးစာမြားကို လှနျစှာစားသုံးခွငျး၊ ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ အစာကိုအခြိနျမှနျမစားခွငျး၊ ကှမျးစားခွငျး၊ အတကျစာမြား အစားမြားခွငျး၊အိပျရေးပကျြခံခွငျး၊ ပငျပနျးသောအလုပျမြား လှနျစှာ လုပျကိုငျခွငျးတို့ကို ရှောငျကွဉျရမညျ။
အာရုံကွော အားနညျးရောဂါကို သကျသာစရေနျအတှကျ သငျ့လြျောသော ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမြားကို ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ။ စားသောကျခြိနျကို အခြိနျမှနျစခွေငျး၊ အခြိနျမှနျမှနျ အိပျခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးစရေနျအတှကျ တရားထိုငျခွငျး၊ နှေးနှေးထှေးထှေးနှငျ့ သနျ့ရှငျးလတျဆတျသော နရောတှငျနခွေငျး၊ နံနကျစောစောတှငျ နပေူဆာလှုံခွငျးတို့ကို ပွုလုပျပေးသငျ့သညျ။
ဝက်သွေးတုံးစားပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရသူ…!
ထောင်ထဲမှာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေကို ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ရွှေမြင့်မိုရ်…!
This Month : 36898
This Year : 232296
Total Users : 591320
Total views : 2712465